dimanche, 07 mars 2021 19:31
Mihavana amin'ny rahalahinao
Samy milaza fa Kristianina isika, andao ezahina tanterahina ary hoe ity Evanjely ity, Karemy fibebahana sy fotoanan'ny fampihavananana rahateo izao, indrindra isika mpitondra, mpanohitra, mpitarika antoko politika, mpitarika fikambanana, rehefa tsy hanao izany, dia aza mampiseho hoe mpivavaka intsony fa manjary mpitari-bato vilam-bava. Matio toko 5, 23-26 23.Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin'ny otely hianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, 24.dia avelao eo amin'ny otely aloha ny fanatitrao, ka mandehàna mihavana amin'ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray. 25.Mihavàna faingana amin'izay manana ady aminao, dieny samy mbola eo an-dàlana hianareo, fandrao atolotr'izay manana ady aminao amin'ny mpitsara hianao, ary ny mpitsara kosa hanatitra anao amin'ny mpamototra, ka hatao an-tranomaizina hianao. 26.Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy hianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany. Izany ary ny Tenin'i Tompo Patrick
Pilo kely : Vita ve ny fifampitahana sary ? Rehefa vita ny fifampitahana sary, afaka miroso amin'ny tena fampandrosoana amin'izay ve, sa mbola anao tatitra indray koa ny ankilany hanome valin-kafatra? Lazao izahay rehefa tapitra ny toraka kapoaka anisana iza no nampihitsana kapoaka be indrindra. Nivadika kermesy manko ty raha ty. Tafandria mandryPatrick
Hono hoa mise le mera, nanakory zay lay hoe mipipi gratos ?
Tsiahy kely iny, alohan'ny hipipi andeha hatory Bonne nuit nareo, tsy azo atao eny ambody hazo an, Tanabao lalan'ny CENAM iny manko de feno azy.Patrick
Nampiasainao Rajaonarimampianina andakana an'i Ravalomanana, azon'i Rajaonarimampanina ny fahefany dia nodakany ianao. Nampiasainao indray Ravalomanana, deputé 73, andakana an'i Rajaonarimampianina, azonao indray ny fahefana article 54 napetrakao ny PM Ntsay Chritsian sy ny Ministre interieur ampandresy anao présidentiel, députation, maire ary sénat. Dia ho gaga ve ianao raha hiaraka Ravalomanana sy Rajaonarimampianina andaka anao ? Fa izay foana moa no eto, mihavana raha misy tiana harodana. L'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Ny gadra eto amintsika, sady efa namono, nangalatra, nanao ny tsy mety teto amin'ny fiaraha-monina, nefa izy indray no velomim-potsiny, anamboarana fonja manara-penitra. Zon'olombelona mivadika, ianao angalarina, aholana indray no mandoa hetra amelomana ny mpangalatra sy ny mpanolana. Tafandria mandry e.Patrick